भोकभोकै बन्द कोठामा रहेका आमाछोरीको उद्धार ! पेटभरी खानछौ भन्दै डाको छोडेर रोए-भिडियो हेर्नुहोस् – Tufan Media News
भोकभोकै बन्द कोठामा रहेका आमाछोरीको उद्धार ! पेटभरी खानछौ भन्दै डाको छोडेर रोए-भिडियो हेर्नुहोस्
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १९:१०
बाँकेमा रूवाबासी,कोरोनाले ८३ बढ़ीको ज्यान गयो,अस्पताल भन्छ अब नयाँ बिरामी लीन सक्दैनौ
काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारी तीब्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप केन्द्रहरुमा खोप लागउनेहरुको भीड नै हुने गर्दछ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले ४ डलरमा ल्याएको कोरोनाविरुद्धको खोप चौगुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेच्न पाउने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अवरोध गर्ने कम्पनी हुकमलाईलाई नै सरकारले चौगुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्ने अनुमति दिएको हो ।
भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट नेपाल सरकारले प्रतिडोज चार डलर (साढे चार सय रुपैयाँ)मा ल्याएको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले सोही खोपको प्रतिडोज १७ सय रुपैयाँ बढी शुल्क उठाउन हुकुमलाई अनुमति दिएको हो ।
योसँँगै सेरमको दुई डोज खोपका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सेरमको कोभिसिल्ड खोपसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि औषधि स्वास्थ्य विभागले अनुमति दिएको छ ।
भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोप ल्याउनका लागि इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सलाई विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन खोपको मूल्य एक डोजकै २६ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस खोपलाई दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ ।
‘अस्ति सम्म काम गर्न
हेलिकप्टरमा राहत लिएर सिन्धुपाल्चोक
छातिमा हात राखेर
पछिल्लो समय टिकटकमा सबैभन्दा
तँ दलितको छोरी,छोराछोरी खोलामा
पत्रकार रवि लामिछानेलाई चितवनबासि
महाकाली नदीले खतराकाे तह पार गर्‍याे
हेलिकप्टरमा राहत लिएर सिन्धुपाल्चोक पुगिन् नायिका श्वेता खडका ( भिडियो हेर्नुहोस् )
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेेहरुको लागि खुसीको खबर ( हेर्नुहोस् )
अ’न्तरजा’तीय विवाह गरेको भन्दै छोरालाई बावुको अ’न्त्येष्टि गर्न दिइएन
मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले ११ जनाको ज्यान लियो,२५ अझै बेपत्ता